သူမရဲ့ဘဝမှာ ဘယ်အရာတွေကို တန်ဖိုးထားခဲ့သလဲဆိုတာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ ကလေး ၄၄ယောက်မွေးဖွားသူ ယူဂန်ဒါမှ အမျိုးသမီး - Lifestyle Myanmar
Home Lifestyle သူမရဲ့ဘဝမှာ ဘယ်အရာတွေကို တန်ဖိုးထားခဲ့သလဲဆိုတာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ ကလေး ၄၄ယောက်မွေးဖွားသူ ယူဂန်ဒါမှ အမျိုးသမီး
သူမရဲ့ဘဝမှာ ဘယ်အရာတွေကို တန်ဖိုးထားခဲ့သလဲဆိုတာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ ကလေး ၄၄ယောက်မွေးဖွားသူ ယူဂန်ဒါမှ အမျိုးသမီး
ငယ်ရွယ်တဲ့ families အများစုမှာ ကလေး ၁ယောက်၊ ၂ယောက်ကို ဘယ်လိုကိုင်တွယ်ရမလဲဆိုတာ တခါတရံမှာ မသိကြပါဘူး။ ကလေး 38ယောက်ရှိတဲ့ အကြောင်းဆိုရင် သင်ဘာပြောမလဲ? ဒါကဟာသမဟုတ်ပါဘူး။ ယူဂန်ဒါနိုင်ငံက ၃၉နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးဟာ ကလေး ၄၄ယောက်ကို မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ ကလေး ၆ယောက်ကို ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာကြောင့် လက်ရှိမှာ ကလေး ၃၈ယောက်ပါ။ သင်မယုံကြည်နိုင်လောက်မှာ မဟုတ်တာကြောင့် ဒီအမျိုးသမီးရဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
သူမရဲ့နာမည်က Mariam Nabatanzi ဖြစ်ပါတယ်။ ဘဝက သူမအတွက် လွယ်ကူတယ်ဆိုတာ မရှိခဲ့ပါဘူး။ သူမအသက် ၁၃နှစ်မှာ သူမရဲ့မိဘတွေက အသက်၂၇နှစ်ရှိတဲ့ အမျိုးသားတစ်ယောက်ဆီကို ရောင်းခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ကတော့ လက်ထပ်တယ်လို့ ခေါ်ပေမယ့် မယ်ရီယမ်အတွက်တာ့ ယောက်ကျားရဲ့အိမ်မှာ ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့အချိန်ထိ ဘာဖြစ်လို့ လိုက်သွားရသလဲဆိုတာတောင် မသိခဲ့ပါဘူး။ တစ်နှစ်အကြာမှာ သူမရဲ့ပထမဆုံးရင်သွေး အမွှာနှစ်ယောက်ကို မွေးဖွားခဲ့ပြီး နောက်နှစ်မှာ သုံးမွှာပူး၊ နောက်နှစ်တွေမှာ လေးမွှာပူး မွေးခဲ့ပါတယ်။
ဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေး တစ်ယောက်သာဖြစ်တဲ့ မယ်ရီယမ် အတွက် အိမ်ထောင်ရေးဟာ ခက်ခဲတဲ့ ခရီးတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာ တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ သူမရဲ့ခင်ပွန်းမှာ အရင်အိမ်ထောင်တွေနဲ့ရတဲ့ ကလေးအတော်များများရှိခဲ့ပြီး သူတို့မိခင်တွေက ကွဲကွာနေတာကြောင့် ထိုကလေးတွေကိုပါ သူမဂရုစိုက်ခဲ့ရပါတယ်။ သူဟာ ကြမ်းကြုတ်တဲ့ သူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပြီး “ကျွန်မက အိုင်ဒီယာတစ်ခု အကြံပေးမိရင်တောင် သူ မကြိုက်တာကြောင့် အခွင့်အရေးရရင် ရသလို ရိုက်နှက်တတ်တယ်လို့ “သူမက ဆိုပါတယ်။
မယ်ရီယမ်ဟာ ကလေး ၂၃ယောက်ရှိလာတဲ့အချိန်မှာ ကလေးထပ်မမွေးဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာကြောင့် သန္ဓေတားနည်းတွေကို ဆရာဝန်ကို မေးမြန်းခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စစ်ဆေးမှုတွေ ပြုလုပ်ပြီးနောက် သူမမှာ မျိုးဥအရေအတွက်မြင့်မားမှုရှိပြီး ဘယ်သန္ဓေတားနည်းမဆို သူမရဲ့ကျန်းမာရေးနှင့် သူမဘဝကိုတောင် အန္တရာယ်ရှိစေလိမ့်မယ်လို့ ဆရာဝန်က ပြောပါတယ်။ မယ်ရီယမ် ဟာ စုစုပေါင်း ကလေး၄၄ယောက်ကို မွေးဖွားခဲ့ပြီး နှစ်မွှာပူး ၆စုံ၊ သုံးမွှာပူး ၄စုံ၊ လေးမွှာပူး ၃စုံနှင့် အမွှာမဟုတ်တဲ့ ကလေးနှစ်ယောက်ကို မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ ကွန်လွန်သွားတဲ့ တခြား ၆ယောက်လည်း ရှိပါသေးတယ်။ မယ်ရီယမ်က ကလေးတွေရှိခြင်းဟာ ဘုရားသခင်က ကောင်းကြီးပေးတာကြောင့် နောင်တမရဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ သူမအတွက် ဝမ်းနည်းစေတဲ့ အရာက သူမကလေးတွေဟာ ဖခင်မရှိဘဲ ကြီးပြင်းရတာဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ သူမရဲ့ခင်ပွန်းဟာ နှစ်တွေ၊ လတွေကြာအောင် မကြာခဏ ပျောက်ကွယ်သွားတတ်ပြီး နောက်ဆုံးမှာ သူတို့ကို လုံးဝ ထားခဲ့ပါတယ်။ ကလေးတွေကို နာမည်ပေးတာက လွဲရင် သူ့က ကလေးတွေကို ပျိုးထောင်တဲ့နေရာမှာ ဘယ်တုန်းကမှ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းတောင် ပါဝင်ခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။ ၂၃နှစ်အရွယ်အကြီးဆုံးသားက “သူ ၁၃နှစ်ကတည်းက ဖခင်ကို မမြင်ခဲ့ရတာလို့” ဆိုပါတယ်။
မယ်ရီယမ်ဟာ မိမိကိုယ်ကို အတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်မိဖို့ ၊ ညီးညူဖို့ အချိန်တောင် မရှိခဲ့ပါဘူး။ သူမရဲ့ကလေးတွေအတွက် မေတ္တာနဲ့ စောင့်ရှောက်မှုတွေ အများကြီးပေးဖို့၊ သူတို့အနာဂတ်အတွက် လိုအပ်တဲ့ အရာရာတိုင်းကို ပေးစွမ်းဖို့ သူမရဲ့တစ်ဘဝလုံးကိုအပ်နှံထားပါတယ်။ ဒီ မိသားစုကြီးအတွက် အကြီးမားဆုံးကုန်ကျစရိတ်တစ်ခုကတော့ အစားအသောက်ဖြစ်ပြီး သူတို့ဟာ ပြောင်းဖူးမှုန့် ဒါမှမဟုတ် ပြောင်းဖူး 10 ကီလို၊ ပဲ ၇ကီလိုနဲ့ သကြား ၄ကီလိုကို နေ့တိုင်း လိုအပ်ပါတယ်။
သူမရဲ့ကလေးအားလုံးဟာ ပညာသင်ကြား ကြရပါတယ်။ သူမရဲ့ပထမဆုံးမွေးဖွားတဲ့ အမွှာနှစ်ယောက်ထဲက တစ်ယောက်ဟာ သူနာပြုဖြစ်လာခဲ့ပြီး တစ်ယောက်က အရည်အချင်းပြည့်မီတဲ့ ဆောက်လုပ်ရေးသမားတစ်ယောက် ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ သူတို့အားလုံးမှာ ရှေ့နေတွေ၊ ကျောင်းဆရာတွေ၊ ဆရာဝန်တွေဖြစ်ချင်တဲ့ ရည်မှန်းချက်ကြီးကြီးတွေရှိကြတာကြောင့် ကျွန်မကလေးတွေ ကျောင်းကို သွားလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်မိကြောင်း ဆိုပါတယ်။ ကျွန်မ မလုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့ အရာတွေ ၊ ဒီအိမ်မက်တွေကို သူတို့ အောင်မြင်စေချင်တယ်လို့ မယ်ရီယမ် ကဆိုပါတယ်။
သူမရဲ့ ကုန်ကျစရိတ်တွေကို ကာမိဖို့ မယ်ရီယမ် ဟာ ကျွမ်းကျင်မှုအမျိုးမျိုးကို သင်ယူခဲ့ပါတယ်။ သူမဟာ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကို ရောင်းဖို့ စုဆောင်းတာ၊ ကိတ်မုန့်ဖုတ်တာ၊ အုတ်စီတာ၊ ဆံပင်ကျစ်တာ၊ ပွဲအလှဆင်ခြင်းနှင့် စီစဉ်သူပြုလုပ်တာ ၊ သတို့သမီးတွေအတွက် ဆံပင်စတိုင်ပြုလုပ်ပေးတာ စသဖြင့် အလုပ်မျိုးစုံလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ” ဒီကလေးတွေက ဘုရားပေးတဲ့ လက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်တာကြောင့် ကျွန်မတန်ဖိုးထားတယ်။ သူတို့အတွက် ရပ်တည်ဖို့ ကျွန်မအကောင်းဆုံး ကြိုးစားတယ်လို့” ဆိုပါတယ်။
BBC သတင်းထောက်ဟောင်း Kassim Kayira ဟာ မယ်ရီယမ် အကြောင်းကို ကြားသိခဲ့ပြီး သူမရဲ့ ထူးချွန်တဲ့မိသားစုဆီကို သွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။ မယ်ရီယမ် ဟာ သူမရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုမှာ မိဘအားလုံးအတွက် မက်ဆေ့စ်တစ်ခုရှိပါတယ်။ “စောစောအိမ်ထောင်ချပေးဖို့အတွက် ကိုယ့်ရဲ့သမီးတွေကို အမျိုးသားဆီ ရောင်းချတာကို ရပ်တန့်ပါ”လို့ ဆိုပါတယ်။ သူတို့မှာ အရမ်းခံစားရပြီး မိဘမေတ္တာဆုံးရှုံးမှုက သူတို့အတွက် ဘယ်တော့မှ နာလန်ပြန်မထူနိုင်တဲ့ အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
“ကျွန်မရဲ့ကလေးတွေ စားဖို့အတွက် အစားအစာ အမြဲတမ်းရှိနေအောင် ကျွန်မ တိုက်ပွဲဝင်ရပါလိမ့်မယ်။ နေ့စဉ်အသက်ရှင်ရပ်တည်မှု ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ခဲ့ရင်တောင် ကျွန်မသူတို့ကို ဘယ်တော့မှ စွန့်ခွာမှာ မဟုတ်ဘူးလို့” ဆိုပါတယ်။ မယ်ရီယမ် ကအင်တာဗျူးမှာ “အိမ်ထောင်ပြုခြင်းဟာ သင့်ကလေးတွေကို ပျိုးထောင်ဖို့ ပူးတွဲတာဝန်တစ်ခုဖြစ်တာကြောင့် သင့်ရဲ့တာဝန်ကို မမေ့ထားပါနဲ့လို့” အမျိုးသားအားလုံးကို အကြံဥာဏ်တစ်ချို့ပေးခဲ့ပါတယ်။
ဒီအမျိုးသမီးအတွက်တော့ ဘဝဟာ အရမ်းခက်ခဲ ကြမ်းတမ်းခဲ့ပါတယ်။ သူမကလေးအားလုံးဟာ ထူးချွန်ပြောင်မြောက်တဲ့ သူတွေအဖြစ် ကြီးပြင်းဖို့ ၊ တစ်နေ့မှာ သူမထိုင်ပြီး အနားယူနေရမယ့်အခွင့်အရေးတစ်ခု ရရှိလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့် ဆန္ဒပြုရင်း Lifestyle Myanmar ပရိတ်သတ်ကြီးအတွက် ဘယ်လိုပဲအခက်အခဲတွေရင်ဆိုင်ရပါစေ မိခင်ကောင်းတစ်ယောက်အဖြစ် ရပ်တည်ခဲ့တဲ့ မယ်ရီယမ်ရဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
သူမရဲ့ဘဝမှာ ဘယျအရာတှကေို တနျဖိုးထားခဲ့သလဲဆိုတာ ဖျောပွခဲ့တဲ့ ကလေး ၄၄ယောကျမှေးဖှားသူ ယူဂနျဒါမှ အမြိုးသမီး
ငယျရှယျတဲ့ families အမြားစုမှာ ကလေး ၁ယောကျ၊ ၂ယောကျကို ဘယျလိုကိုငျတှယျရမလဲဆိုတာ တခါတရံမှာ မသိကွပါဘူး။ ကလေး 38ယောကျရှိတဲ့ အကွောငျးဆိုရငျ သငျဘာပွောမလဲ? ဒါကဟာသမဟုတျပါဘူး။ ယူဂနျဒါနိုငျငံက ၃၉နှဈအရှယျအမြိုးသမီးဟာ ကလေး ၄၄ယောကျကို မှေးဖှားခဲ့ပါတယျ။ ကလေး ၆ယောကျကို ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာကွောငျ့ လကျရှိမှာ ကလေး ၃၈ယောကျပါ။ သငျမယုံကွညျနိုငျလောကျမှာ မဟုတျတာကွောငျ့ ဒီအမြိုးသမီးရဲ့ ဇာတျလမျးလေးကို မြှဝပေေးလိုကျပါတယျ။
သူမရဲ့နာမညျက Mariam Nabatanzi ဖွဈပါတယျ။ ဘဝက သူမအတှကျ လှယျကူတယျဆိုတာ မရှိခဲ့ပါဘူး။ သူမအသကျ ၁၃နှဈမှာ သူမရဲ့မိဘတှကေ အသကျ၂ရနှဈရှိတဲ့ အမြိုးသားတဈယောကျဆီကို ရောငျးခဲ့ပါတယျ။ သူတို့ကတော့ လကျထပျတယျလို့ ချေါပမေယျ့ မယျရီယမျအတှကျတာ့ ယောကျကြားရဲ့အိမျမှာ ကနျြရဈခဲ့တဲ့အခြိနျထိ ဘာဖွဈလို့ လိုကျသှားရသလဲဆိုတာတောငျ မသိခဲ့ပါဘူး။ တဈနှဈအကွာမှာ သူမရဲ့ပထမဆုံးရငျသှေး အမှာနှဈယောကျကို မှေးဖှားခဲ့ပွီး နောကျနှဈမှာ သုံးမှာပူး၊ နောကျနှဈတှမှော လေးမှာပူး မှေးခဲ့ပါတယျ။
ဆယျကြျောသကျမိနျးကလေး တဈယောကျသာဖွဈတဲ့ မယျရီယမျ အတှကျ အိမျထောငျရေးဟာ ခကျခဲတဲ့ ခရီးတဈခုဖွဈတယျဆိုတာ တှရှေိ့ခဲ့ပါတယျ။ သူမရဲ့ခငျပှနျးမှာ အရငျအိမျထောငျတှနေဲ့ရတဲ့ ကလေးအတျောမြားမြားရှိခဲ့ပွီး သူတို့မိခငျတှကေ ကှဲကှာနတောကွောငျ့ ထိုကလေးတှကေိုပါ သူမဂရုစိုကျခဲ့ရပါတယျ။ သူဟာ ကွမျးကွုတျတဲ့ သူတဈယောကျလညျးဖွဈပွီး “ကြှနျမက အိုငျဒီယာတဈခု အကွံပေးမိရငျတောငျ သူ မကွိုကျတာကွောငျ့ အခှငျ့အရေးရရငျ ရသလို ရိုကျနှကျတတျတယျလို့ “သူမက ဆိုပါတယျ။
မယျရီယမျဟာ ကလေး ၂၃ယောကျရှိလာတဲ့အခြိနျမှာ ကလေးထပျမမှေးဖို့ ဆုံးဖွတျခဲ့တာကွောငျ့ သန်ဓတေားနညျးတှကေို ဆရာဝနျကို မေးမွနျးခဲ့တယျလို့ ဆိုပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ စဈဆေးမှုတှေ ပွုလုပျပွီးနောကျ သူမမှာ မြိုးဥအရအေတှကျမွငျ့မားမှုရှိပွီး ဘယျသန်ဓတေားနညျးမဆို သူမရဲ့ကနျြးမာရေးနှငျ့ သူမဘဝကိုတောငျ အန်တရာယျရှိစလေိမျ့မယျလို့ ဆရာဝနျက ပွောပါတယျ။ မယျရီယမျ ဟာ စုစုပေါငျး ကလေး၄၄ယောကျကို မှေးဖှားခဲ့ပွီး နှဈမှာပူး ၆စုံ၊ သုံးမှာပူး ၄စုံ၊ လေးမှာပူး ၃စုံနှငျ့ အမှာမဟုတျတဲ့ ကလေးနှဈယောကျကို မှေးဖှားခဲ့ပါတယျ။ ကှနျလှနျသှားတဲ့ တခွား ၆ယောကျလညျး ရှိပါသေးတယျ။ မယျရီယမျက ကလေးတှရှေိခွငျးဟာ ဘုရားသခငျက ကောငျးကွီးပေးတာကွောငျ့ နောငျတမရဘူးလို့ ဆိုပါတယျ။ သူမအတှကျ ဝမျးနညျးစတေဲ့ အရာက သူမကလေးတှဟော ဖခငျမရှိဘဲ ကွီးပွငျးရတာဖွဈတယျလို့ ဆိုပါတယျ။ သူမရဲ့ခငျပှနျးဟာ နှဈတှေ၊ လတှကွောအောငျ မကွာခဏ ပြောကျကှယျသှားတတျပွီး နောကျဆုံးမှာ သူတို့ကို လုံးဝ ထားခဲ့ပါတယျ။ ကလေးတှကေို နာမညျပေးတာက လှဲရငျ သူ့က ကလေးတှကေို ပြိုးထောငျတဲ့နရောမှာ ဘယျတုနျးကမှ တဈစိတျတဈပိုငျးတောငျ ပါဝငျခဲ့ခွငျးမရှိပါဘူး။ ၂၃နှဈအရှယျအကွီးဆုံးသားက “သူ ၁၃နှဈကတညျးက ဖခငျကို မမွငျခဲ့ရတာလို့” ဆိုပါတယျ။
မယျရီယမျဟာ မိမိကိုယျကို အတှကျ စိတျမကောငျးဖွဈမိဖို့ ၊ ညီးညူဖို့ အခြိနျတောငျ မရှိခဲ့ပါဘူး။ သူမရဲ့ကလေးတှအေတှကျ မတ်ေတာနဲ့ စောငျ့ရှောကျမှုတှေ အမြားကွီးပေးဖို့၊ သူတို့အနာဂတျအတှကျ လိုအပျတဲ့ အရာရာတိုငျးကို ပေးစှမျးဖို့ သူမရဲ့တဈဘဝလုံးကိုအပျနှံထားပါတယျ။ ဒီ မိသားစုကွီးအတှကျ အကွီးမားဆုံးကုနျကစြရိတျတဈခုကတော့ အစားအသောကျဖွဈပွီး သူတို့ဟာ ပွောငျးဖူးမှုနျ့ ဒါမှမဟုတျ ပွောငျးဖူး 10 ကီလို၊ ပဲ ရကီလိုနဲ့ သကွား ၄ကီလိုကို နတေို့ငျး လိုအပျပါတယျ။
သူမရဲ့ကလေးအားလုံးဟာ ပညာသငျကွား ကွရပါတယျ။ သူမရဲ့ပထမဆုံးမှေးဖှားတဲ့ အမှာနှဈယောကျထဲက တဈယောကျဟာ သူနာပွုဖွဈလာခဲ့ပွီး တဈယောကျက အရညျအခငျြးပွညျ့မီတဲ့ ဆောကျလုပျရေးသမားတဈယောကျ ဖွဈလာခဲ့ပါတယျ။ သူတို့အားလုံးမှာ ရှနေ့တှေေ၊ ကြောငျးဆရာတှေ၊ ဆရာဝနျတှဖွေဈခငျြတဲ့ ရညျမှနျးခကျြကွီးကွီးတှရှေိကွတာကွောငျ့ ကြှနျမကလေးတှေ ကြောငျးကို သှားလိမျ့မယျလို့ မြှျောလငျ့မိကွောငျး ဆိုပါတယျ။ ကြှနျမ မလုပျနိုငျခဲ့တဲ့ အရာတှေ ၊ ဒီအိမျမကျတှကေို သူတို့ အောငျမွငျစခေငျြတယျလို့ မယျရီယမျ ကဆိုပါတယျ။
သူမရဲ့ ကုနျကစြရိတျတှကေို ကာမိဖို့ မယျရီယမျ ဟာ ကြှမျးကငျြမှုအမြိုးမြိုးကို သငျယူခဲ့ပါတယျ။ သူမဟာ ဟငျးသီးဟငျးရှကျတှကေို ရောငျးဖို့ စုဆောငျးတာ၊ ကိတျမုနျ့ဖုတျတာ၊ အုတျစီတာ၊ ဆံပငျကဈြတာ၊ ပှဲအလှဆငျခွငျးနှငျ့ စီစဉျသူပွုလုပျတာ ၊ သတို့သမီးတှအေတှကျ ဆံပငျစတိုငျပွုလုပျပေးတာ စသဖွငျ့ အလုပျမြိုးစုံလုပျခဲ့ပါတယျ။ ” ဒီကလေးတှကေ ဘုရားပေးတဲ့ လကျဆောငျတဈခုဖွဈတာကွောငျ့ ကြှနျမတနျဖိုးထားတယျ။ သူတို့အတှကျ ရပျတညျဖို့ ကြှနျမအကောငျးဆုံး ကွိုးစားတယျလို့” ဆိုပါတယျ။
BBC သတငျးထောကျဟောငျး Kassim Kayira ဟာ မယျရီယမျ အကွောငျးကို ကွားသိခဲ့ပွီး သူမရဲ့ ထူးခြှနျတဲ့မိသားစုဆီကို သှားရောကျခဲ့ပါတယျ။ မယျရီယမျ ဟာ သူမရဲ့ ယဉျကြေးမှုမှာ မိဘအားလုံးအတှကျ မကျဆစျေ့တဈခုရှိပါတယျ။ “စောစောအိမျထောငျခပြေးဖို့အတှကျ ကိုယျ့ရဲ့သမီးတှကေို အမြိုးသားဆီ ရောငျးခတြာကို ရပျတနျ့ပါ”လို့ ဆိုပါတယျ။ သူတို့မှာ အရမျးခံစားရပွီး မိဘမတ်ေတာဆုံးရှုံးမှုက သူတို့အတှကျ ဘယျတော့မှ နာလနျပွနျမထူနိုငျတဲ့ အရာတဈခုဖွဈတယျလို့ ဆိုပါတယျ။
“ကြှနျမရဲ့ကလေးတှေ စားဖို့အတှကျ အစားအစာ အမွဲတမျးရှိနအေောငျ ကြှနျမ တိုကျပှဲဝငျရပါလိမျ့မယျ။ နစေ့ဉျအသကျရှငျရပျတညျမှု ဆငျးရဲဒုက်ခရောကျခဲ့ရငျတောငျ ကြှနျမသူတို့ကို ဘယျတော့မှ စှနျ့ခှာမှာ မဟုတျဘူးလို့” ဆိုပါတယျ။ မယျရီယမျ ကအငျတာဗြူးမှာ “အိမျထောငျပွုခွငျးဟာ သငျ့ကလေးတှကေို ပြိုးထောငျဖို့ ပူးတှဲတာဝနျတဈခုဖွဈတာကွောငျ့ သငျ့ရဲ့တာဝနျကို မမထေ့ားပါနဲ့လို့” အမြိုးသားအားလုံးကို အကွံဉာဏျတဈခြို့ပေးခဲ့ပါတယျ။
ဒီအမြိုးသမီးအတှကျတော့ ဘဝဟာ အရမျးခကျခဲ ကွမျးတမျးခဲ့ပါတယျ။ သူမကလေးအားလုံးဟာ ထူးခြှနျပွောငျမွောကျတဲ့ သူတှအေဖွဈ ကွီးပွငျးဖို့ ၊ တဈနမှေ့ာ သူမထိုငျပွီး အနားယူနရေမယျ့အခှငျ့အရေးတဈခု ရရှိလိမျ့မယျလို့ မြှျောလငျ့ ဆန်ဒပွုရငျး Lifestyle Myanmar ပရိတျသတျကွီးအတှကျ ဘယျလိုပဲအခကျအခဲတှရေငျဆိုငျရပါစေ မိခငျကောငျးတဈယောကျအဖွဈ ရပျတညျခဲ့တဲ့ မယျရီယမျရဲ့ဇာတျလမျးလေးကို မြှဝပေေးလိုကျပါတယျ။
Previous articleမျက်နှာအသားအရေကို ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ အသားအရေထိန်းသိမ်းတဲ့နေရာမှာ အသုံးပြုတဲ့ ထုတ်ကုန် ၉မျိုး
Next articleလူမရှိတဲ့အခါ သင့်အိမ်ကို သူခိုးမကပ်အောင်၊ ပစ္စည်းမပျောက်သွားအောင် ဘယ်လိုတွေပြုလုပ်သင့်သလဲ။
အတိတျနဲ့ ပစ်စုပ်ပနျကွားက ကွီးမားတဲ့ ခွားနားခကျြကို ပွသနတေဲ့ ရုပျပွ (၁၀)ခု